40 * 40mm copper PCB & PCBA warshad SMD tayo sare leh MCPCB 3535 oo hogaaminaysay PCB
Xuduudaha farsamada iyo awooda geeddi-socodka ee biraha substrate (MCPCB)
Oogada LF HASL, dahab quusin, lacag quusin, OSP
Lakabka Hal dhinac, Multilayer laba dhinac leh iyo qaabdhismeed gaar ah
Baaxadda ugu badan ee PCB 240mmx1490mm AMA 490x1190mm
Dhumucda PCB 0.4-3.0mm
Dhumucdiisuna waxay ahayd bireed H 1/2/3/4 (oz)
Dhumucda lakabka daboolka 50/75/100/125/150/175/200 (um)
Dhumucda Birta Aluminium (1100/3003/5052/6061), Aluminium Copper
Dhumucda Birta 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 3.2 / 5.0 (mm)
Qaabaynta Dhimasho feer / Wadada CNC / V-Cut
Tijaabi 100% imtixaan furan & gaagaaban
Qaab samaynta Die Punching<+- 0.05mm,CNC Route<+-0.15mm,V-CUT
Dulqaadka daloolka + -0.5mm
Ballaca Min.Hole Dhinac keli ah 0,5 / Laba gees leh PTH0.3MM
Maaskaro Alxan cagaar / caddaan / madow / casaan / jaalle
Dhererka Min.letter 0.8mm
Booska Min.line 0.15
Baaxadda Min.letter 0.15
midabka shaashadda buluug / caddaan / madow / casaan / jaalle
Dalool gaar ah Bar ku taal / koob dalool / lagu aasay god / haanta la duugay
Qaabka feylka Gerber, Pro-tel, Power PCB, Auto CAD iwm
MCPCB waa soo gaabinta Birta xudunta PCBS, oo ay ku jiraan PCB ku saleysan aluminium, PCB naxaas ku salaysan iyo PCB ku saleysan bir.
Aluminium ku saleysan guddiga waa nooca ugu caansan. Qalabka aasaasiga ahi wuxuu ka kooban yahay udubdhexaadka aluminium, heerka caadiga ah ee FR4 iyo naxaas. Waxay soo bandhigeysaa lakab kuleyl ah oo kuleyl ah oo kuleylka kuleylka habka ugu waxtarka badan inta lagu jiro qaboojinta qaybaha. Waqtigaan la joogo, PCB-ka ku saleysan Aluminium waxaa loo arkaa inuu yahay xalka awoodda sare. Aluminium ku saleysan aluminium ayaa beddeli kara guddiga dhoobada dhoobada dhoobada ah, iyo aluminiumku wuxuu siiyaa xoog iyo adkeysi shey aan saldhigyada dhoobada ahi awoodi karin.
Subagga naxaasku waa mid ka mid ah maaddooyinka birta ugu qaalisan, iyo ku-xirnaanta kuleylka ayaa marar badan ka wanaagsan tan aluminium iyo birta. Waxay ku habboon tahay kuleylka ugu sarreeya ee kuleylka kuleylka wareegga wareegga sarreeya, qaybaha gobollada leh kala duwanaansho weyn oo heerkulka sare iyo hooseeya iyo qalabka isgaarsiinta saxda ah.
Lakabka kuleylka kuleylka ayaa ah mid ka mid ah qeybaha asaasiga ah ee maaddada loo yaqaan 'copper substrate', sidaa darteed dhumucda baaxadda naxaasku inta badan waa 35 m-280 m, taas oo ku guuleysan karta awood xoog leh oo xambaaridda hadda socota. Marka loo barbardhigo substrate aluminium, substrate copper waxay ku guuleysan kartaa saameyn kuleylka kuleylka, si loo hubiyo xasilloonida sheyga.
Qaab dhismeedka Aluminium PCB
Lakabka Maarta Wareegga
Lakabka naxaasta wareegga ah ayaa la horumariyay oo loo qaabeeyey si loo sameeyo wareegga daabacan, substrate aluminiumku wuxuu qaadi karaa xawaare ka sarreeya isla dhumucda FR-4 iyo baaxadda isku midka ah.
Lakabka dahaarka leh
Lakabka dahaadhku waa tiknoolajiyada asaasiga ah ee aluminium-ka aluminium, oo inta badan ciyaaraya howlaha kuleylka iyo kuleylka. Lakabka aluminiumka aluminiumku waa kan ugu weyn ee ka hortagga kuleylka ee qaabdhismeedka qaybta awoodda. Markasta oo ay fiicnaato kuleylka kuleylka lakabka dahaadhka, ayaa si wax ku ool ah u faafinaysa kuleylka soo baxa inta lagu jiro hawlgalka qalabka, iyo heerkulka aaladda ee hooseeya, Sunta birta ah.
Bir noocee ah ayaan u dooran doonaa inay tahay birta birta dahaarka leh?
Waxaan u baahanahay inaan tixgalino isku dheelitirka kuleylka, kuleylka kuleylka, xoogga, adkaanta, culeyska, xaalada dusha sare iyo qiimaha biraha.
Caadi ahaan, aluminium ayaa isbarbardhig ahaan ka raqiisan naxaasta. Qalabka aluminium ee la heli karo waa 6061, 5052, 1060 iyo wixii la mid ah. Haddii ay jiraan shuruudo sare oo ku saabsan kuleylka, aaladaha farsamada, guryaha korantada iyo waxyaabaha kale ee gaarka ah, taarikada naxaasta ah, taarikada birta ah, taarikada birta iyo taarikada birta
1.Audio: Input, kordhiyo wax soo saarka, kordhiyo dheellitiran, kordhiyo audio, kordhiyo awood.
2.Power Supply: Beddelaha jaangooyaha, DC / AC beddelaha, jaangooyaha SW, iwm
3.Automobile: jaangooyaha elektarooniga ah, shidida, xakamaynta korantada, iwm.
4. Kombuyuutar: Kombiyuutarka CPU, qalabka diskiga lagu duubo, qalabka korontada keena, iwm.
5.Podules-yada: Invert-er, xawilaadaha adag ee gobolka, buundooyinka hagaajinta.
6. Nalalka iyo nalalka: Nalalka tamarta badbaadiya, noocyo kala duwan oo midab leh oo badbaadiya tamarta, nalalka banaanka, nalalka masraxa, iftiinka isha
Hore: Shiinaha Shenzhen Custom FR4 94v0 Daabacidda Wareegyada Wareegyada Adeegga Soo-saaraha Elektaroonigga Naqshadeynta Mid Labaad Isukeenista PCB Kale
Xiga: Aluminium tayo sare leh oo tayo sare leh aluminium LED wareega wareega PCB 220V, MCPCB, guddiga PCB, 94VO PCB
Macdanta Base PCB
Guddiga PCB Aluminium iyo MCPCB loogu talagalay nalalka LED-ka PCB
PTR / IR Sensor Daabacaysa Wareegtada Wareegga PCB Wixii Con ...
3D laab awood MCPCB 1.6MM 1OZ 0.24W / mk Auto LED ...